ကိုယ်နှင့်လာဆိုင်သောအခါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကိုယ်နှင့်လာဆိုင်သောအခါ
Posted by မောင် ပေ on Feb 11, 2013 in Creative Writing, Short Story, Think Different | 34 comments
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ဟာ ပြည်ထောင်စုနေ့ 
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ 
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ဟာ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ 
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း အဆိုပါ နေ့ ၃နေ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာတော်တော်များများ ဖတ်ရပါတယ် ။ တွေ့ ရပါတယ် ။
ဒါနဲ့ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ပို့ စ်လေးတစ်ပုဒ်လောက်ရေးချင်ပါတယ် ။
ပြည်ထောင်စုနေ့ အမှတ်တရ နဲ့ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ အမှတ်တရ တို့ အတွက်တော့ ၊ ကိုယ့်မှာ စာတစ်ပုဒ်ရေးလောက်စရာ မဖွဲ့ နိုင်တာကြောင့် ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ မှာ ပျော်ကြမယ့် ချစ်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးပါတယ်ဗျာ။ အရိုးသားဆုံး ပွင့်လင်းစွာပြောပြတာပါနော ။
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သမ္မတအုပ်ချုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာပြီး ၊ နေရာတော်တော်များများ ၊ ကိစ္စတော်တော်များများမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ ရှိလာပါတယ် ။ ဖြစ်သမျှအကြောင်းအားလုံးကို မပွင့်လင်းသေးဘူးဆိုရင်တောင်မှ ၊ လက်ရှိကြုံနေရတဲ့ မြင်သာမှုတွေဟာ ၊ အရင်စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှုတွေ လက်အောက်မှာ လုံးဝမရှိခဲ့တာကိုတော့ လက်ခံကြရပါလိမ့်မယ် ။
နောက်ပြီး ဒီနေ့ ခေတ်ကြီးဟာ အရမ်းကို တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ် ။
(ချစ်သူများနေ့၊ ချစ်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးမှာမို့၊ တခြားအကြောင်းအရာများကို ဥပမာ မပေးတော့ပါ)
ဒီနေ့ ခေတ်ကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အထဲမှာ စုံတွဲတွေအတွက်တော့ ကောင်းပေမယ့် ၊ သမီးရှင်တွေ မျက်ခုံးအကြီးအကျယ်လှုပ် ၊ စိတ်ပူစိုးရိမ်မှုတွေ ဖြစ်စေမယ့် တိုးတက်လာခြင်းများလဲ ပါနေတာကို တွေ့ ကြရမှာပါ ။
အရင်ခေတ်တွေတုန်းက သမီးရည်းစားတွေဆိုရင် ၊ ချိန်းတွေ့ ဖို့ ရာ နေရာရှားပါးလွန်းခဲ့ကြပါတယ်။
သူရို့ တွေ ခဗျာ.. စာသင်ကျောင်းတွေက စာသင်ခန်းတွေအတွင်းနှိုက်သော် လည်းကောင်း ၊ လူသွားလူလာရှင်းသော ပန်းခြံများအတွင်းရှိ ခြုံပုတ်များအတွင်းနှိုက်သော် လည်းကောင်း ၊ မြို့ ပြင်ဘက်ထွက်ပြီး လယ်ကွင်းများနှိုက်သော် လည်းကောင်း ၊ ခက်ခက်ခဲခဲ ချိန်းခဲ့ကြရရှာပါတယ် ။
အရင်ခေတ်မှာလဲ တည်းခိုခန်းတွေ ၊ ဟော်တယ်တွေ ရှိနေပြီဆိုပေမယ့် ၊ အဲ့ခေတ်တွေတုန်းက အရှက်တရား အကြောက်တရား က ဒီနေ့ ခေတ်လောက် မရှားပါးသေးတာမို့၊ အဲ့ခေတ်မှာ တည်းခိုခန်းမှာချိန်းတယ် ၊ ဟိုတယ်မှာချိန်းတယ် ဆိုတာ အနည်းငယ်သော အတွဲများသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ ခေတ်မှာကြတော့… ရုပ်ရှင်ရုံနာမည်ခံ အတွဲချိန်းစရာနေရာများ ၊ ကေတီဗွီများ ၊ သီးသန့် အဲကွန်းခန်းများကို နာရီပိုင်းဖြင့် ငှားနေလို့ ရသော ကော်ဖီဆိုင်နာမည်ခံများ ၊ အချိန်ပိုင်း အခပေးနေတဲ့ မိုတယ်များ ၊ အင်းများ ၊ ဟိုတယ်များ အရမ်းပေါများလာတဲ့အခါကြ ၊ သမီးရည်းစားတွေအတွက် ချိန်းတွေ့ ဖို့ရွေးခြယ်စရာတွေ များလာပါပြီ ။
နောက်ပြီး အရင်ခေတ်တုန်းက သန္ဓေတားဆေး ဆိုတာ သိပ်မသုံးခဲ့ကြပါဘူး ။ သိပ်မပေါများတာကြောင့်မို့ လဲ ပါမယ်ထင်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ ခေတ်မှာတော့ တားဆေးတွေဟာ ပလူကိုပျံနေတာမို့၊ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် လွယ်ကူစွာ ဝယ်ယူသုံးစွဲလို့ ရနေပြီပေါ့ ။
ဆိုတော့ သမီးရည်းစားအတွဲတွေဖို့ တော့ ၊ ကာမ ကို ဝေမျှ ( ဒါမှမဟုတ် ) ရင်ခုန်သံခြင်း အနီးကပ်ဆုံးဖလှယ် ဖို့ဆိုရင် ၊ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေအတွက် အုန်းစားစရာ သိပ်မလိုတော့ဘူးပေါ့ ။
နောက်ပြီး အရင်ခေတ်တုန်းက ယောက်ျားလေးတွေ စိတ်ဝင်စားလေ့ရှိတဲ့ ၊ ( စိတ်မဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားလဲ ရှိရင်ရှိမှာပါ ) ၊ လိင်ဆက်ဆံတာတွေကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ၊ အပြာကား လို့ ခေါ်တဲ့ အောကားတွေ ဆိုတာမျိုးက ကြည့်ရဖို့ အရမ်းရှားခဲ့တာကိုး ။ ဗီဒီယိုရုံလေးတွေ သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင် ၊ ရဲကလာဖမ်းလို့ မိရင် ၊ ကတုံးတုံးလွှတ်တာ ၊ မျက်ခုံးမွှေးရိတ်လွှတ်တာတို့ မျိုး ရှိခဲ့တော့ ၊ ခက်ခက်ခဲခဲရှားရှားပါးပါး ကြည့်ခဲ့ကြရတာမျိုးပေါ့ ။
ခုခေတ်မှာတော့ ဈေးပေါပေါနဲ့ ဝယ်လို့ ရတဲ့ အမ်ပီဖိုးပလေယာတွေ ၊ တက်ပလက်တွေ ၊ အန်းဒရွိုက်ဖုန်းတွေ ရှိနေပြီဆိုတော့ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ဟာကို အလွယ်တကူ ကြည့်လို့ ရနေပြီဆိုတော့… ၁၀နှစ်သားအရွယ်ကစလို့၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ဗီဒီယိုတွေ /အောကား တွေ ကို ကြည့်တဲ့သူက ကြည့်ပြီး လက်တဲ့စမ်းချင်တဲ့သူကလဲ လက်တဲ့စမ်းချင်နေတဲ့ခေတ်ကိုးဗျ ။
အဲဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲ မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ၊ လူငယ်တွေဟာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် နဲ့ ရည်းစားထားကြတာပါပဲ (၁၆နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုအများကြီး ပါပါတယ်) ။ အသက်ငယ်ငယ် ညီမငယ်လေးတွေခဗျာလဲ ကိုရီးယားရုပ်သံဇါတ်လမ်းတွဲများထဲက ပြတဲ့ ဇါတ်လမ်းများကြောင့်သော်လည်းကောင်း ၊ အရည်သွေးညံ့ ဘာဇါတ်လမ်းမှမရှိတဲ့ အဆင့်မရှိ ခုတွေ့ ခုချစ် ခုချိန်း မြန်မာရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားများကြောင့်သော် လည်းကောင်း ၊ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရည်းစားထားချင်နေကြပါတယ်။
အရင်ခေတ်တုန်းက ရည်းစားထားတယ်ဆိုတာ ၊ သမီးရည်းစားအတွဲတော်တော်များများ ဟာ ချိန်းကြပြီ ဆိုရင် စကားလက်ဆုံကြ ၊ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း ၊ ဘယ်တော့လောက်မှာ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းကြမယ့်အကြောင်း ၊ အလွန်ဆုံးရှိလှမှ လက်ကလေးကိုင် ၊ အာဗွားလေး ဘာလေးပေးရုံ ရှိခဲ့ကြတာပေါ့
အာဗွားလေး ပေးရရင်ကို ၊ ကိုယ့်မှာ တော်တော်ဟုတ်လှပြီ ၊ အရမ်းပျော်ခဲ့ကြရတဲ့ ခေတ်ပေါ့ဗျာ
ဒီနေ့ ခေတ် ကလေးများကတော့ လက်တွေကသွက်တယ်ဆရာရေ… သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့၊ ဘယ်ကေတီဗွီမှာ အစပျိုးမယ် ၊ ပေါက်ဆီစားမယ် ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဂိုးသွင်းမယ် အဲ့လိုအဲ့လိုတွေ ဖြစ်နေကြတာကလား ။ နောက်ပြီး အခုခေတ် လူငယ်တွေ ရည်းစားထားရင် ၊ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းယူဖို့ ဆိုတာ သူတို့ လေးတွေရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ လုံးဝမရှိတဲ့ ၊ မစဉ်းစားကြတဲ့ အကြောင်းအရာကြီးကို ဖြစ်လို့၊ သူတို့ လေးတွေ တွေးနေတာ ၊ လုပ်ဖို့ ကြံနေတာ ဘာလဲ ဆိုတော့ ၊ လက်တဲ့စမ်းကြဖို့ ပဲ ၊ ဆိုတော့ဗျာ…။
မောင်ပေ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ “ ကိုယ်နဲ့ လာဆိုင်သောအခါ ” ဆိုသော အကြောင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းအရာက မရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ် ။ အခုရေးမယ့်ဇါတ်လမ်းထဲမှာ ဆက်ဆံရေးအကြောင်းများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတွေ ထည့်ရေးထားပါတယ် ။ အဲဒါမျိုးကို အညှီ ၊ ညှီတယ် လို့ထင်တဲ့ စာဖတ်သူများ ရှိရင် ၊ ဆက်မဖတ်ပါနဲ့ လို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ ။
ဇါတ်ကောင်နာမည်ကိုတော့ မောင်ရိုး လို့ မှတ်ပေါ့ဗျာ ။
အဲဒီ မောင်ရိုး ဆိုသည့်ကောင်ဟာ တစ်ကယ်ကို ဇွတ်တရွတ်နိုင်တဲ့ကောင်ပါ ။
ရည်းစားတွေ တော်တော်များများ ထားခဲ့ဖူးပေမယ့် ၊ မောင်ရိုး ရဲ့ လူပျိုပေါက်အရွယ်မှာ အရင်ခေတ်ကလူတွေနဲ့ အပေါင်းအသင်းလုပ် အရွယ်ကြီးလာတာဆိုတော့… သူတို့ တွေ သင်ပေးထားသလို ၊ ကိုယ် တာဝန်မယူနိုင် ၊ လက်ထပ်မပေါင်းသင်းနိုင်ပဲနဲ့၊ သူများ သမီးပျို ကို လိင်ဆက်ဆံခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဖူးဘူးပေါ့ ။
နောက်ပိုင်းကြ သူ့ ဆရာသမားတွေက ဘယ်လို သင်ပေးသလဲဆိုတော့ ၊ “သူကျွေးကိုယ်စား ငရဲမသွား” တဲ့
အဲ့မှာ မောင်ရိုးတစ်ယောက် သူ့ ကျွေးမယ့် အမျိုးသမီးမျိုးကို ရှာတွဲတော့တာပေါ့ဗျာ
အဲဒါမျိုးတွေကို စာဖတ်သူများလဲ တွေ့ ဖူး မြင်ဖူး ကြားဖူး (ကြုံရင်လဲကြုံဖူး) ကြမှာပါ
မရှိခဲ့ဖူးဘူး ဆိုရင်လဲ အခုဖတ်ဗျာ
မောင်ရိုး နောက်ပိုင်းထားတဲ့ ရည်းစား ၊ တွဲတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဘယ်လို ပုံစံမျိုးတွေလဲ ဆိုတော့ ၊ ပိုက်ဆံရှိ ဘဲကြီးများ ရဲ့ ကစ်ပင်းတွေပါသလို ၊ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းပါမယ်ဆိုပြီး ကတိတွေခံ လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီးမှ ရည်းစားကပစ်သွားလို့ လောကကြီးကို အရွဲ့ တိုက်ပြီး ထင်ရာစိုင်းတဲ့ အမျိုးသမီးများ ၊ တစ်ချို့(လုံးဝအနဲငယ်ပဲ ရှိပါတယ် ) အထိအတွေ့ ကို အရမ်းကြိုက်တဲ့ အမျိုးသမီး တွေ လဲ ပါတာပေါ့ ။ အဲ့ဒီတွေထဲမှာ ကျန်တာတွေက သိပ်ကိစ္စမရှိပေမယ့် ၊ ဘောစိတွေ ရဲ့ ကစ်ပင်းနဲ့ကွယ်ရာမှာတွေ့ တာမျိုးကတော့ ဖောင်းမယ်ထင်ပါတယ် ။ သူများ သားမယား ကို ပစ်မှားတာမျိုး ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ် ။
အဲဒီ ကစ်ပင်းတွေဆိုတာကလဲ ၊ သူ့ ဘောစိ က တစ်လနေမှ တစ်ပတ်မျိုးလောက် တွဲတာဆိုတော့ ၊ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ အပျင်းပြေ ဟဝှါဖြစ် ဘာညာ အတွက် လင်ငယ် ၊ ဘဲငယ် ရှာတတ်ကြတာကလား ။
မောင်ရိုးခဗျာ သူ့ ဆရာတွေရဲ့ လမ်းညွှန်ပို့ သချက်အသစ်ကြောင့် ၊ အလုပ်အကိုင်ကို မအားဘူး ဖြစ်ရတော့ရှာပေါ့။
နောက်ပိုင်းကြတော့ ၊ မောင်ရိုးတစ်ယောက် သူ့ ဘဝ အတွက် ပေါင်းသင်းယူသင့်တဲ့ ၊ လက်တွဲဖော်ကို တွေ့ ရှိသွားပါတော့တယ် ။
ဇါတ်လမ်းကတိုပေမယ့် ၊ အစအဆုံး တစ်ဆက်ထဲရေးလိုက်ရင် ၊ ဖတ်တဲ့သူ စိတ်မရှည်မှာစိုးလို့ ၊ ၂ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ် ၊ ဇါတ်သိမ်းပိုင်းကို နောက်ရက်တွေအတွင်း အမြန်ဆုံး ရေးတင်ပါမယ် ။
ကြည့်ကြသေးတာပေါ့မောင်ရိုးရယ် . . .
နောက်တစ်ခန်းကျ မင့် ဘာဖြစ်မလဲဆိုဒါ . . . ဟင်း
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးပြထားတဲ့ ပို့ စ်မှာ
ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လာရောက်ကွန်မင့်ပေး ပေးတဲ့အတွက်
မောင်ရိုး .. ဘီလို ဖစ်တွားဒုံး သိချင်နေဒါ …
ဒါနဲ့ စကားမစပ် …. ပြောပြရင်တော့ဖြင့် ….
နောက်ပေါက်တွေအတွက် စိုးရိမ်မိတာ အမှန်ပဲ …
ကျွန်တော့်ရဲ့ အောက်က ကောင်ကတော့ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မိန်းမ ရသွားပြီ ….
သူက ယောက်ျားလေးမို့ ရှိစေတော့ပဲ ထားပါတော့ …
နောက် သူ့အောက်က ညီမ သုံးယောက် …
အရွယ် မရောက်သေးပေမယ့် …
သူတို့တွေ အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါ ဆိုပြီး … တွေးပူနေမိတာ အမှန်ပဲ ….
စာရဲ့ ဆိုလိုရင်း နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ခံစားဖတ်ရှုပေးသွားသော အံကြီးအား ရှဲရှဲပါ
ကံမကောင်းဘူးလို့ ပြောချင်တာလားဟင်င်င် ..
ကိုယ့်ဆရာနှစ်ယောက် အခုမှ ပေါ်လာတယ်ဗျာ
ကွန်မင့်တွေအတွက် အားဖြစ်ရလို့ရှဲရှဲပါ
အင်း မောင်ရိုး မောင်ရိုး နောက်ပိုင်းတော့လည်း မောင်ကြိုက်ကြီးဖြစ်သွားတာပါပဲလား
အခုလို လာရောက် ကွန်မင့်ပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
မောင်ရိုးကနေ မောင်ကြိုက် ဖြစ်လာမလား ဆိုတာ
ဇါတ်သိမ်းပိုင်းမှာ ဆက်လက် ဖတ်ကြည့်ပေးပါဗျို့ 
ဆုံးမစကားများကို နာယူမှတ်သားထားကြောင်းပါ လေးဗောက်
ကိုရင်တောင် အရင်တုန်းက မိန်းကလေးတစ်ယောက်
ရည်းစားဖြစ်ပီးတောင် လက်မကိုင်ရဲလို့ ၆လလောက်
အဲ့က ကိုရိုးဟာ ဆရာပေ မဟုတ်ဘူးလို့
ကိုရင် ယုံကြည်ပါတယ်.. ဇာတ်သိမ်းခန်းလေး ဖုန်းကနေ
ဇါတ်သိမ်းပိုင်းကို 13.2.2013 ညမှာ ပြီးအောင် ရေးတင်ပါမယ်နော
အင်းးးးးး ကျုပ်တို့ မှာလည်း ကလေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ ပိုပြီး တွေးပူရသပေါ့ 
သို့ သော်လည်း ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာ အတင်းလုပ်ယူလို့ မရတာပဲလေ
ဒီတော့ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာလေး လမ်းကြောင်းပေးရင်းးးးးး
သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ လို့လည်း မပြောရဲ ပါဘူး ဗျို့ 
သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မတကာ လို့ ပြောဖို့ အရမ်းခက်တာ အမှန်ပါပဲ ကိုဆာမိရေ
ပညာပေးအစီအစဉ်တွေ များများလုပ်ပြီးတော့ ထိန်းရမှာပဲဗျို့
ဇာတ်သိမ်းခန်းကို မျှော်နေမယ် ဦးပေရေ…
ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်မဆိုင်ပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူငယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လာတော့ မဆိုင့်တဆိုင်ဖြစ်လာတယ်။
ဒါကို ညှီတယ်လို့ မပြောပါဘူး။
ခေတ်ကြီးက လွယ်လွန်းနေတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပညာပေးမှ ရတော့မယ်။
မောင်ရိုး အေ မကိုက်ပါဘူး ခင်ဗျာ
မောင်ရိုး ရဲ့ ဇါတ်လမ်းကို ပြီးအောင် ရေးတင်မှာပါ
အန်တီမာ့ရဲ့ ကွန်မင့်သည် မောင်ပေ့အတွက် အားများစွာဖြစ်ရပါတယ်
သြော် မောင်ရိုး တစ်ယောက် သူ့အတွက်လက်တွဲဖော်တွေ့တယ်ဆိုတော့
အရင်က သူတွေသည် လက်မတွဲဘဲ ဘာတွဲတာလည်း တွေးကြည့်မ်ိရင်း ပြုံးနေမိတယ်ဗျာ။
မောင်ရိုး ဘဝအတွက် လက်တွဲဖော်ဆိုတော့ ၊ သူချစ်ခင်စွာနဲ့ လက်ထပ်ပေါင်းသင်းယူမယ့် အမျိုးသမီးပေါ့နော
ခုခေတ်လူငယ်တွေ ကိုကြည့်ရင်း ကျုပ်လည်း
ဖတ်ရှုအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျို့ 
ကပေကတော့ မန်းလေးသားပီပီ ဒဲ့ပဲ
လာဖတ်ပြီး ကွန်မင့်ပေးလို့ 
နာ ပြန်လာရင်တော့ မုန့်စားတွားမယ်၊ မုန့်လိုက်ကျွေးမယ်နဲ့ အဲ့ဒီတွေကို ခေါ်တွားဖို့မကြံနဲ့။
မဒမ်ပေလောင်းလေးနဲ့ အတူတူ လိုက်မုန့် ကျွေးမှာပေါ့လို့ 
သူလေးနဲ့ လဲ မိတ်ဆက်ပေးမှာပေါ့လို့ 
အင်း အိုက်လာ… အိုက်လာ တွေအပြင်…
ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်ရာကိုလက်တဲ့စမ်းဖို့ အပြင်… ယောက်ကျား မိန်းမ …မရွေး စပွန်စာကြိုးဇားရှာကြတဲ့ ဒီနေ့ခလေးတွေရဲ့ အစွမ်းကလဲ အံ့မခမ်းပါပဲ…
အရီးလေးရဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးတူတော်မောင် တစ်ယောက်ကို
ဆုံးမစကားကို ဒီလိုပြောမိပါတယ် ရီးစားထာရင် သူများသာသမီးကို မယူနိုင်ရင်
လွန်လွန်ကျူးကျူး မဖြစ်စေနဲ့ လို့ပြောတော့ သူကဘာပြန်ပြောလဲဆို
ကောင်မလေးတွေက ချိန်းတွေ့ရင် မဖက်ရင် အာဘွားမပေးရင်တောင်
အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကိုယ့်ကလေးတွေ အတွက်ရင်လေးပါဘိ
mon khin says:
အခု ချက်ကြီး ဆိုက်က ပိတ်သွားပြီဆိုတော့ အရင်လက်ကျန်လား